यसपालि बेहुलाको लुगामा नयाँ ट्रेन्ड आएकै हो ? यस्तो पहिरनमा सजिए बेहुलाहरू - Himali Patrika
यसपालि बेहुलाको लुगामा नयाँ ट्रेन्ड आएकै हो ? यस्तो पहिरनमा सजिए बेहुलाहरू
हिमाली पत्रिका २८ मङ्सिर २०७७, 8:18 pm
जुना श्रेष्ठ / सेतोपाटी
‘अहिले ब्रोकेड र भेलभेट दौरा सुरुवालकै अर्डर बढी लियौं,’ दिनेशले भने, ‘ग्राहकहरू आफैंले डिजाइन दिनुहुन्छ। धेरैले भारतीय संस्कृतिबाट प्रभावित लुगा डिजाइन बनाउन खोज्नुहुन्छ।’
‘कसैले सल्लाह माग्दा त हामी ढाकाकै कपडा सिलाउन भन्छौं। तर ग्राहकको रोजाइमा ढाका पर्न छाड्यो क्यार। एकै खालको कपडाभन्दा ट्रेन्डमा भएको कपडा लगाऔं भन्ने हुन्छ होला। एकचोटि गर्ने विवाहमा अरूभन्दा भिन्नै देखिऊँ भन्ने पनि लाग्दो हो। यसपालिको चलन ब्रोकेडको छ,’ दिनेशले ठट्यौली पारामा भने।
ब्रोकेड कपडा उज्यालो, चहकिलो र आकर्षक देखिने भएकाले पनि धेरैको रोजाइमा परेको हुनसक्ने तरुनिका बताउँछिन्। रातो र सेतो-घ्यू रङको ‘कम्बिनेसन’ आकर्षक नै हुन्छ!
‘ब्रोकेड र भेलभेट मुलायम र हेर्दा पनि राम्रो देखिन्छ। बेहुलीले रातो रङ लगाउँदा बेहुलाले हल्ला क्रिमी, सेतो, पहेँलो लगाउँदा बढी आकर्षक पनि देखिन्छ,’ तरुनिकाले भनिन्, ‘यसरी हल्का रङको कपडा लगाउने चलन पनि बलिउडबाटै प्रभावित होला।’
‘विवाहका लागि प्रायः सुट-प्यान्ट, ढाकाको र जातीय पोशाक सिलाउने पनि हुन्छन्। बजारमा विभिन्न डिजाइन चले पनि ढाकाको व्यापारमा भने खासै फरक पर्दैन,’ सुरेशले भने। विक्रेता सुरेश मौलिक र संस्कृति झल्काउने हिसाबमा बिहेका कपडा तयार पार्ने हो भने ढाकाकै सिलाउन सल्लाह पनि दिन्छन्।
अर्कातर्फ नयाँ बानेश्वरस्थित ‘नमूना दौरा सुरुवाल’ का व्यवसायी विद्या बग्दास भने ट्रेन्ड र बजारअनुसार चल्नु उचित बताउँछिन्।
उनी भन्छिन्, ‘सबैको इच्छा फेसन र ट्रेन्डअनुसार बजार चल्ने हो। तुलनात्मक हिसाबमा यसपालि बेहुला सेटका लागि भेलभेट र ब्रोकेडको कपडाको धेरै अर्डर आयो। चलनअनुसारै माग आउने त हो।’